အလုပ်အားတယ် မအားဘူးဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်က သူ့အတွက် အရေးပါခြင်း မပါခြင်းတွေနဲ့ ဆိုင်တယ် – One Daily Media
အလုပ်အားတယ် မအားဘူးဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်က သူ့အတွက် အရေးပါခြင်း မပါခြင်းတွေနဲ့ ဆိုင်တယ်
လူတစ်ယောက်ရဲ့ အားခြင်းမအားခြင်းဆိုတာ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ကိုယ်ဟာသူ့အတွက် အရေးပါခြင်းမပါခြင်းနဲ့ အများကြီးသက်ဆိုင်ပါတယ်
ဘယ်လောက် ဝေးတဲ့ အရပ်မှာပဲ နေနေ ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လောက် ခက်ခဲနေပါစေ . . . ကိုယ့်ကိုယ်သာ တမ်းတမ်းတတ သတိရရင် မရမက ဆက်သွယ်လာမှာပဲ နေနိုင်တဲ့သူအတွက်တော့ အနီးအနားမှာရှိလဲ လာဖို့ခက်ခဲတယ် မလာချင်တဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် မလာနိုင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေ ရာနဲ့ချီရှိနေနိုင်ပါတယ် တမ်းတမ်းတတ တွေ့ချင်တဲ့ လူတစ်ယောက်အတွက်တော့သတိရစိတ်တစ်ခုကပဲ တွေ့ဆုံခြင်းရဲ့ အကြောင်းပြချက်ပါ
ကျွန်မ နားလည်မပေးတတ်တဲ့ မိန်းမသား တစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး မအားတာကို မအားတဲ့အကြောင်းပြောထားရင် ကျွန်မ အချိန်တစ်ခုထိလဲ စောင့်ပါ ။၂၄နာရီလုံးဖုန်းဆက်ပြီး နှောင့်ယှက်နေတတ်တဲ့ မိန်းမလဲ မဟုတ်ဘူး သတိတရနဲ့ ဖုန်းဆက်လာမယ့်အချိန်လေးကိုတော့ တစ်စိုက်မတ်မတ်နဲ့ မျှော်ခဲ့မိပါတယ်
အလုပ်များနေတဲ့ကြားကမှ ကျွန်မကို အလုပ်ပျက်ခံပြီး ဂရုစိုက်ရမယ်လို့ မတောင်းဆိုဘူး မအားရင် မအားတဲ့အကြောင်းလေး ကြိုပြီး ပြောပြထားတဲ့အခါ ကျွန်မလဲ ရင်မောရသက်သာတယ်လေ တစ်ခါတစ်လေ မဆက်လာတဲ့ဖုန်းတွေကိုမျှော်ရင် ညတွေ ဘယ်လောက်အိပ်ပျက်ရတဲ့အကြောင်း သူမသိခဲ့ဘူး ။ အသံလေးကြားရုံနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်မအိပ်တတ်တဲ့ စိတ်တွေက ဖုန်းတွေ ခဏခဏ ကောက်ကိုင်မိတယ် သူများ သတိတရနဲ့ခေါ်မလားပေါ့ ။ အိပ်ရေးပျက်ပြီး မျက်တွင်းနက်တာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ် နေနိုင်တဲ့သူက နေနိုင်တာပဲလေ ။
မိန်းမသားတို့အတွက် ကျွန်မဘဝနှင့်ရင်းပြီးရခဲ့သော သင်ခန်းစာများ – သျှင်ယွန်း စာအုပ် City Mart နှင့် Ocean ဆိုင်တိုင်းတွင် ဝယ်ယူလို့ရပါပြီ
စကားမပြောချင်ပဲနဲ့ ဝဋ်ကျေတမ်းကျေပြောဆိုဆက်ဆံနေရတာ တစ်ဖက်လူလဲ ပင်ပန်းသလို ကျွန်မလဲ နားထောင်ရတာ စိတ်ပင်ပန်းတယ် ပြီးတော့ ဝမ်းနည်းတယ်
ကျွန်မကပဲ သတိရခြင်းတွေ မထိုက်တန်တာလား လူတစ်ယောက်အတွက် အရေးမပါတာလားကျွန်မလဲ လူပါ ဂရုတစိုက်နဲ့ အရေးတစ်ယူနဲ့ တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် အရေးပါချင်ဖူးတယ်
နောက်ဆုံး နားလည်သွားခဲ့တာက လူတစ်ယောက်ရဲ့ အားခြင်းမအားခြင်းဆိုတာ အမြဲတမ်း အလုပ်များခြင်းမများခြင်းနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ကိုယ်က သူ့အတွက်ဘယ်လောက်ထိ အရေးပါတယ် မပါဘူးနဲ့ပဲ သက်ဆိုင်ပါတယ် ။ ။
လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အားျခင္းမအားျခင္းဆိုတာ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကိုယ္ဟာသူ႔အတြက္ အေရးပါျခင္းမပါျခင္းနဲ႔ အမ်ားႀကီးသက္ဆိုင္ပါတယ္
ဘယ္ေလာက္ ေဝးတဲ့ အရပ္မွာပဲ ေနေန ဒါမွမဟုတ္ဘယ္ေလာက္ ခက္ခဲေနပါေစ . . . ကိုယ့္ကိုယ္သာ တမ္းတမ္းတတ သတိရရင္ မရမက ဆက္သြယ္လာမွာပဲ ေနႏိုင္တဲ့သူအတြက္ေတာ့ အနီးအနားမွာရွိလဲ ​လာဖို႔ခက္ခဲတယ္ မလာခ်င္တဲ့လူတစ္ေယာက္အတြက္ မလာႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ရာနဲ႔ခ်ီရွိေနႏိုင္ပါတယ္ တမ္းတမ္းတတ ေတြ႕ခ်င္တဲ့ လူတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့သတိရစိတ္တစ္ခုကပဲ ေတြ႕ဆုံျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ပါ
ကြၽန္မ နားလည္မေပးတတ္တဲ့ မိန္းမသား တစ္ေယာက္မဟုတ္ဘူး မအားတာကို မအားတဲ့အေၾကာင္းေျပာထားရင္ ကြၽန္မ အခ်ိန္တစ္ခုထိလဲ ေစာင့္ပါ ။၂၄နာရီလုံးဖုန္းဆက္ၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ေနတတ္တဲ့ မိန္းမလဲ မဟုတ္ဘူး သတိတရနဲ႔ ဖုန္းဆက္လာမယ့္အခ်ိန္ေလးကိုေတာ့ တစ္စိုက္မတ္မတ္နဲ႔ ေမွ်ာ္ခဲ့မိပါတယ္
အလုပ္မ်ားေနတဲ့ၾကားကမွ ကြၽန္မကို အလုပ္ပ်က္ခံၿပီး ဂ႐ုစိုက္ရမယ္လို႔ မေတာင္းဆိုဘူး မအားရင္ မအားတဲ့အေၾကာင္းေလး ႀကိဳၿပီး ေျပာျပထားတဲ့အခါ ကြၽန္မလဲ ရင္ေမာရသက္သာတယ္ေလ တစ္ခါတစ္ေလ မဆက္လာတဲ့ဖုန္းေတြကိုေမွ်ာ္ရင္ ညေတြ ဘယ္ေလာက္အိပ္ပ်က္ရတဲ့အေၾကာင္း သူမသိခဲ့ဘူး ။ အသံေလးၾကား႐ုံနဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မအိပ္တတ္တဲ့ စိတ္ေတြက ဖုန္းေတြ ခဏခဏ ေကာက္ကိုင္မိတယ္ သူမ်ား သတိတရနဲ႔ေခၚမလားေပါ့ ။ အိပ္ေရးပ်က္ၿပီး မ်က္တြင္းနက္တာပဲ အဖတ္တင္ပါတယ္ ေနႏိုင္တဲ့သူက ေနႏိုင္တာပဲေလ ။
လမ်းခွဲပြီးနောက်ပိုင်း လုံးဝမလုပ်သင့်တော့တဲ့ အချက်...
ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်တဲ့အခါ နားလည်မှုတွေ၊ မေတ္တာတွေနဲ့...
တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေဆိုတာ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး...
သင်သူ့ကို တကယ်ချစ်မ မချစ် ဒီ (၁၂) ချက်ကို...
မချစ်တော့တာမှ မဟုတ်ပဲ ချစ်လျက်နဲ့လဲ ဝေးရတတ်ပါတယ်